Mhinduro yeP3Dv4 autoinstaller
1 gore 3 ago #950 by DRCW
Hey ini ndakadhonza ndege ye2 yeP3DV4 uye nokuda kwechimwe chikonzero, mugadziri anoda kuisa iyo faira mu (chirongwa x (86) iyo inzvimbo yeZIKNUMX bit zvinyorwa zvakarongwa. Lockheed inopinda muIndaneti Faira ye 32 bit operation. ndege inowanikwa apo ichiedza kusarudza ndege yacho kunyange zvazvo ini ndawana chiratidzo chekuisa kwaibudirira.Ndakatarisa mukati meFiripi faira uye hapana chaipo.Icho hachisi dambudziko kwandiri sezvo ini ndinongotanga kuisa ndege kune desktop yangu, uye ikopike ndege yekufambisa kuenda kune, ndege yangu mapepa.Asi ndaifunga kuti ndingakuudza iwe, Thanks
1 gore 3 ago #951 by rikoooo
Dai ndingava nezita reimwe yezvinyorwa izvi kuitira kuti ndikwanise kuedza imwe nguva kuti ndidzore iko kukanganisa uye ndozogadzirisa.
1 gore 3 ago #953 by DRCW
Chokwadi ... Falcon 50 uye Douglas C47, Thanks
1 gore 3 ago #954 by rikoooo
Ini ndangobva ndichitsvaga kuedza uye ndisina kuwana dambudziko, mugadziri anopinda mu 64 bits folder kwandiri.
Ndiri paWindows 10 64 bits. uchishandisa P3D v4. Asi iniwo ndine P3D v1 v2 v3, FSX uye FSX Steam yakaiswa uye X-Plane 9 ku11.
Iyo installer haigone kukanganisa nokuti inotarisa nzira yaP3D v4 kubva paWindows registry yaive P3D v4 yakaumba ikakona kwayo pachayo neyo nzira.
Iwe unogona kutarisa muHKEY_CURRENT_USER \_ Software \_ Lockheed Martin \_ Prepar3D v4 \_ AppPath
Ndiudzei nzira ipi yezvinhu zviviri zviri zviviri (shandisa regedit.exe kubva paWindows command kuti uwane iyo mabhuku echiremba)
1 gore 3 ago #955 by DRCW
Zvechokwadi, ndiri kushandisa windows 7 SP1 ... Izvozvo zvingava nharo, ini ndichatarisa mazviri
1 gore 3 ago #961 by DRCW
Zvakanaka, yakanga iri dambudziko nemahwindo 7 uye yakanga iri mhosho yekuregeresa. kunyange zvazvo kubhadhara kwaive kuripo, maWindows 7 aida kutora kuHurumende yekare yakatendeka (x86). Ini ndichange ndakatenga motokari yeSSD kuti ndifambe mawindo munguva pfupi, ndaona kuti FSX neP3D vanobudirira zviri nani pane imwe motokari. Windows inotanga kupinda munzira. Vongai nekupindura kwenyu panguva yakakodzera! Happy Landings
1 gore 3 ago #963 by rikoooo
Ok ndinokutendai nemhinduro dzenyu
Time chokusika peji: 0.335 mumasekonzi